कम्युनिस्ट नेतृ उँटमा चढेपछि बबण्डर, तस्बिर सामाजिक सन्जालमा भाइरल::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
कम्युनिस्ट नेतृ उँटमा चढेपछि बबण्डर, तस्बिर सामाजिक सन्जालमा भाइरल
काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की नेतृ एवम् संसदीय दलको सचेतक शान्ता चौधरीले दोहा भ्रमणका बेला उँटमा चढेको तस्वीर फेसबुकमा राखेर स्टाटस लेखेपछि आलोचना भएको छ । नेतृ चौधरीले उँटमा चढेको तस्वीरभन्दा पनि दोहामा रहेका नेपाली मजदुरहरूसँगको तस्वीर राख्नुपर्ने भन्दै आलोचना भएको हो ।
केही दिन अगाडि दोहामा आयोजित कार्यक्रममा भाग लिन पुगेका बेला नेकपाकी नेतृ चौधरी उँटमा चढेकी थिइन् । उनले उँटमा चढेको तस्वीर फेसबुकमा अपलोड गरिन् । आपलोड गरेको केही छिनमै थेगिनसक्नुको लाइक आयो भने एक सयभन्दा धेरै कमेन्ट आएका छन् । धेरै कमेन्टहरू नेतृ चौधरीको विपक्षमा छन् । चौधरीको आलोचना गरिएको छ ।
तस्वीरसँग नेतृ चौधरीले ‘घोडा चढ्ने लड्छन अरे, उठ्दै अघि बढ्छन अरे, मनमा आँट हुनेहरू अग्लो शिखर चढ्छन अरे, तर उँट चढेको हो है’, भनेर स्टास लेखेकी छिन् ।
आलोचना गर्नेहरूले दोहाको तातो घाममा पसिना बगाएका मजदुरसँग बसेको तस्वीर अपलोड गरेको भए राम्रो हुने थियो भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
सस्तो लोकप्रियतामा रम्दै आएकी पूर्वएमाले पृष्ठभूमि भएकी नेकपाकी नेतृ चौधरीले आफूलाई अहिले पनि मुक्त कमलरीको ट्याग लगाएर राजनीतिक फाइदा लिँदै आएकी छिन् । नेतृ चौधरीभन्दा धेरै संघर्ष गरेका थुप्रै मुक्त कमलरी छन् । उनीहरूका बारेमा सोँच्ने फुर्सद नेतृ चौधरीलाई छैन ।
मुक्त कमलरीकै नाममा राजनीतिक पहिचान बनाएकी नेतृ चौधरीको आर्थिक अवस्था पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ । उनको जीवनस्तर ह्वात्तै माथि उठेको छ ।
नेतृ चौधरीको उँटमा चढेको तस्वीरमा कमेन्ट गर्दै जितेन्द्र बेल्वासेले लेखेका छन्, ‘माननीयज्यू दोहामा आएर नयाँ घोँडा (उँट)मा चड्नु भएछ बधाइ हजुरलाई घोँडा चड्दै गरेका तस्वीरहरू राख्दै गर्दा ती घोडा चडेका राष्ट्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिक क्याम्पतिर सँगै बसेका तस्वीरहरू पनि राखिदिनु भएको भए राम्रै हुने थियो कि ? हजुरहरूको मर्यदाले ती श्रमिक क्याम्पतिर प्रतिबन्ध लगाइदियो कि ?’
घनश्याम चौधरीले कमेन्ट गर्दै लेखेका छन्, ‘माननीयज्यू हजुरहरू विदेश भ्रमण जानु हुन्छ के उदेश्यले जानु भएको ? राष्ट्रको लागि केही गर्ने भनेर हो भने तेस्तो खालको फोटो अपलोड गर्नुस् । हजुरले उँट चढेको एकदमै सुहाएछ । तर, हजुरले उँट चढेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा राखेको सुहाएन माननीयज्यूको हैसियतले । हजुरलाई उँट चढ्ने इच्छा भएर चढ्नु भएहोला आफ्नो ईच्छा पूरा गर्नु भयो ठीक छ । तर, यस्तो फोटो हजुरले अपलोड गरेर हजुरले विभिन्न किसिमको कमेन्टबाटै थाहा पाइसक्नु भयो होला ।’
लोकेन्द्रराज शाहीले लेखेका छन्, ‘दुधालु अरबी नस्लको घोडा (उँट) परेछ । यो चढेपछि शिखर मात्र कहाँ हो र कमरेड अन्तरिक्षमै पुगिन्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका नेता लक्ष्मण घिमिरेले लेखेका छन्, ‘उँट चढेर घोडाको धाक । यस्तो त बलिउडका हिरोइनले मात्र गर्न सक्छन् रे । माननीयज्यूलाई बोक्न पाउने भाग्यमानी उँट ।’